गायीका मिलन नेवार भक्कानिँदै भन्छिन्: डिभोर्सपछि पनि मेरो करियर सिध्याउन खोजिँदैछ (भिडियो सहित) -
Homeसमाचारगायीका मिलन नेवार भक्कानिँदै भन्छिन्: डिभोर्सपछि पनि मेरो करियर सिध्याउन खोजिँदैछ (भिडियो सहित)
January 3, 2021 admin समाचार 2604
कलाको सि’माना हुँदैन । कुनै भूगोलको परिब’न्धमा पनि बाँधिन सक्दैन । न त कलाको जात र थर नै हुन्छ । कलाले जी’वन बोल्छ, प्रकृतिको अनुपम उप’हारलाई वर्णन गर्छ । जगतलाई सचेत गराउँछ । तर, समाजको ऐना बनेका सबै कलाकारको जीवन भने र’सपूर्ण हुँदैन । उनीहरुले गायका, अभि’नय गरेका, लेखेका जस्तै केही दुःखदायी कथा आफ्नै जीवन’मा भोगेका हुन्छन् ।
भारत आसामकी गायि’का मिलन नेवार गायनको कर्मभूमि बनाउन नेपाल छिरिन्, नेपालीको मन पनि जितिन् । नेपाली’मूलका धेरै भारतीय नागरिकले आफ्नो कलाको कर्म’स्थल नेपाललाई बनाएका छन् । यस्तै धेरै नेपाली भारतमा पुगेर कलाको क्षमता उजा’गर गरेका छन् । यहीको निरन्त’रतामा गायिका मिलन पनि नेपाल आइन् ।
एकाएक गायकी क्षमता र सुमुधर स्व’रकी धनी मिलनले नेपालीको मन जितिन्, सबैको मन मनमा बस्न स’फल भइन् । यतिमात्रै होइन उनको कर्मभूमिमात्रैमा नेपाल समिति रहने, वैवाहिक सम्ब’न्ध पनि नेपालसँगै गाँसिन । नामजस्तै मिलनको नेपाली युव’कसँग मिलन भयो अर्थात नेपाली युवक मेन्सन अमात्यसँग लग’नगाँठो कसिन् । – इताजा खबरबाट
आज २०७७ पुस २० गते सोमबारको राशिफल हे्नुहोस्
March 14, 2021 admin समाचार 933
April 5, 2021 admin समाचार 868
December 22, 2020 admin समाचार 2365
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (160265)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (155028)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (154518)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (153784)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (153593)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (151411)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (151388)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (149698)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (145238)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145075)